मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढौ – Bhindai Kura
आज २०७७ वैशाख २३ गते मंगलबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ५१ हजार नाघ्यो, ११ लाख ९३ हजार उपचारपछि निको भए